Mahazoa misimisy kokoa amin'ny Robots Trading | Fivarotana robot
(Tsara ho fantatra…)
1 taona mahery (AR)
4 taona mahery (AR)
7 taona mahery (AR)
1 taona mahery (SR)
4 taona mahery (SR)
7 taona mahery (SR)
Mahazoa misimisy kokoa amin'ny Robots Trading
Te hanana fidiram-bola tsotra sy / na hanamora ny fampiasam-bolanao ve ianao? raha tsy mandany fotoana be, tsy misy tsindry ara-tsaina, ary na dia tsy misy fahalalana momba ny tsena na programa aza?
antsika Robot mifanakalo varotra misolo tena vahaolana mety, tsarao ny tenanao:
Fampisehoana ireo robots momba ny varotra
Rohy Youtube - Cliquer ici - mba hahafahanao mametraka dikanteny amin'ny fiteninao amin'ny horonantsary - ahoana no hatao? -
Lahatsary horonantsary Fanolorana ireo robots momba ny varotra
Sasatra mandray ve ianao mahaliana kely?
Te-hahazo tombony amin'ny tsenambola ianao, fa tsy manana ny fahalalana ilaina ianao na tsy manam-potoana hikarakarana azy? Angamba matahotra ny fianjerana sy ny fampiasam-bola tsy ampoizina ianao na angamba te hampiovaova ny fampiasam-bolanao?
Matokia ianao : manana ny vahaolana ho anao izahay!
Fantatrao ve fa azo atao ny manombatombana amin'ny tsenambola, tsy mila manao na inona na inona, tsy misy fahalalana manokana ary hiteraka fidiram-bola ahazoana aina?
Tsia, tsy nofinofy izany, na fanaovana hosoka, fa vahaolana!
Ahoana? 'Sa' Inona? Misaotra ireo algorithma novolavolainay ary iza no mamaky ny CAC na DAX hividianana sy hivarotana azy ho azy, tsy misy fitsabahan'ny olombelona.
Io no fampiasam-bola tsara indrindra ampitomboy ny volanao!
Ny pejy fampisehoana 1 taona manome anao fampahalalana marina.
Liana? Haingana, satria ny moterantsika dia amidy amin'ny fatra voafetra amin'ny vidiny atolotra ankehitriny.
Ahoana ny fiasan'ny robot fifanakalozana
Rohy Youtube - Cliquer ici - mba hahafahanao mametraka dikanteny amin'ny fiteninao amin'ny horonantsary - ahoana no hatao? -.
Fifandraisana: Ny algorithms anay dia asiana kaody miaraka amin'ilay maody ProOrder ny sehatra ProRealTime, amin'ny alàlan'ny Banky IG Bank.
Fanamarihana: Tsy mifandray amin'ny ProRealTime sy / na IG Bank izahay ary tsy mahazo komisiona avy amin'izy ireo.
CAC: France 40 Cash (€ 1) - CAC - Index an'ireo tahiry frantsay 40 be solontena indrindra eny an-tsena.
CFD: Ny CFD dia vokatra azo avy amin'ny derivative izay manamora sy mora vidy ny maminavina amin'ny fitaovana ara-bola isan-karazany.
Dax: Alemana 30 Cash (€ 1) - DAX - Index an'ireo tahiry alemà be solontena 30 be indrindra eny an-tsena.
Nandritra ny alina: Raha misy toerana hitazona amin'ny faran'ny fotoam-pivoriana (mazàna 23:00) dia azo ampiharina ny saram-bola mandritra ny alina miankina amin'ny sandan'ny sandan'ny toerana.
Lahatsary horonantsary Ahoana ny fiasan'ny robots varotra
Ny algorithms anay dia kaody miaraka amin'ny maodelin'ny ProOrder an'ny rindrambaiko ProRealTime, amin'ny alàlan'ny Banque IG Bank. Mividy sy mivarotra tanteraka ho azy ireo izy ireo.
Mandinika ny tsena ny maoteranay CAC na DAX ary manapaha hevitra ny fanapahan-kevitr'izy ireo, manaraka marina ny paikady napetraka.
Tsy mila fahalalana ianao eo amin'ny tsenambola na amin'ny fandaharana ary hiasa ny moterantsika na dia maty aza ny solosainao.
Tombontsoa ho an'ny maotera
Ny fikajiana amin'ny tsenan-tahiry amin'ny alàlan'ny algorithmanay dia maneho fanamoriana isan-karazany raha leo mandray zanabola ianao.
Matetika mitana andraikitra ny fitongilanana ara-tsaina hafetsena ratsy be amin'ny mpandinika. Miaraka amin'ny moterantsika, tsy misy io risika io.
Ny toerana rehetra raisina dia mihidy amin'ny andro iray ihany mba tsy mila mandoa sarany famatsiam-bola amin'ny alina.
Izy io koa dia misoroka izay banga mety hitranga mandritra ny alina na amin'ny faran'ny herinandro.
Misaotra ny tombotsoan'ny CFD mora ny mahazo bebe kokoa. Asehonay aminao ny fomba ao amin'ilay pejy Mandresy +.
Fitsipika momba ny paikady
Raha misy fepetra fenoina dia hametraka fividianana entana fohy na fivarotana fohy ny robot. manohitra ny fitarihan'ny fironana lehibe.
Paikady mahomby io, satria ny tsenam-bola isan-karazany matetika.
Mpamatsy vola mampiasa paikady manaraka fironana tsy maintsy maka fatiantoka kely maro vao mahazo tombony be. Ity fomba ity, izay tena mandaitra koa, dia manana fatiantoka mitaky fitoniana be.
Ireo robots ara-barotra ataonay dia manana a Raiso Profit (Ambony) ary a Stop Loss (Hampidina) hanakatona varotra. Na dia ao anatin'ny fepetra sasany aza dia hikatona haingana kokoa ireo.
Mavitrika izy ireo mandritra ny ora fisokafana mahazatra ny fifanakalozam-bola, manomboka amin'ny 9:00 maraina ka hatramin'ny 17:30 hariva. Nandritra io vanim-potoana io no ny fanaparitahana no mora indrindra ary izany ny tsy fetezana no avo indrindra.
Miorina amin'ny alàlan'ny labozia mandritra ny 30 minitra. Tsy misy ifandraisany amin'ny varotra matetika izay, amin'ny lafiny iray, dia mandrindra fifanakalozana an'arivony isan-tsegondra, ary izay natokana ho an'ireo orinasa manampahaizana manokana izay tsy maintsy afaka mivarotra amin'ny vola be dia be. Ireo dia CES robot izay manana mpanao gazety ratsy, ary misy antony marim-pototra, satria izy ireo dia manova ny vidin'ny fitaovana ara-bola ampiasainy mba hahazoana tombony azo avy amin'izy ireo.
Antsipirihany momba ny algorithmanay
Ny motera fivarotanay dia mampiasa ny tondro Supertrend> ary a Mivezivezy eo ho eo mamantatra ny làlan'ny fironana lehibe.
Mampiasa ny Bollinger Bands sy ny Stochastic Oscillator izy ireo hahitana ny fivadihan'ny fironana.
Manararaotra ny ADX sy ADXR izy ireo handrefesana ny tanjaky ny fironana.
Manondro tondro isan-karazany izy ireo hanivanana ireo varotra mety hampidi-doza.
Mampiasa tondro hafa izy ireo hampijanonana ny varotra aloha arakaraka ny fironan'ny vidiny.
Indraindray izy ireo dia mampihetsika ny Stop Loss.
Ny robots-tsika rehetra dia miaraka amin'ny Take Profit (ambony) ary Stop Loss (ambany).
Ampiasaina ireo Tondro Teknika ireo?
ADX et ADXR : mandrefy ny fahafaha-mamindra ny vidiny ivelan'ny fiovaovana tamin'ny vanim-potoana teo aloha izy ireo.
Tarika Bollinger : izy ireo dia ampiasaina hanondroana ambaratonga mihoa-bidy sy be loatra. Asehon'izy ireo raha milamina ny tsena na miovaova.
Mivezivezy eo ho eo : asehon'izy ireo ny salan'isan'ny vidiny mandritra ny fotoana voafaritra. Izy ireo dia manana ny vokatry ny fihenan'ny vidiny.
Stochastic : oscillator izy io izay manambara ny sehatry ny fividianana be loatra sy ny fivarotana be loatra.
Supertrend : mivoatra ambony na ambany ny vidiny miankina amin'ny fironana. Izy io dia manivana amin'ny fomba mahomby ireo hetsika kely amin'ilay hazakazaka.
VIDEO ROBOT TRADING
Ireo robots ara-barotra ataontsika
Indeks sy fitantanana vola
Fitantanana vola sy tatitra
Varotra miaraka amin'ny varotra Robot
Fivarotana Algorithmika Grand-rue 10 CH-2054 Chézard-St-Martin
Copyright © 2020 - Robot-trading.io Zo rehetra voatokana